Mogadishu Journal » Meydka Sargaal katirsanaa ciidamada AMISOM oo laga helay Muqdisho
Mjournal :-Sargaal katirsanaa ciidamada booliiska AMISOM kana soo jeeda dalka Uganda ayaa shalay oo sabti ah meydkiisa laga helay guri uu ka deganaa xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.
Edward Bagonza oo kamid ahaa kaaliyayaasha Taliyaha Booliska AMISOM ee Soomaaliya, ayaa meydkiisa laga helay gurigii uu degnaa, lamana oga wali sababta keentay geerida sargaalkan AMISOM katirsanaa.
Sargaal u hadlay booliiska AMISOM oo lagu magacaabo Grace Turyagumanaw ayaa xaqiijiyay geerida sargaalka katirsan AMISOM, mana faah faahin sababta keentay geerida sargaalkaasi.
Booliiska AMISOM ayaa wada baaritaano ku aadan waxa keenay geerida sargaalkan katirsanaa ciidankooda, lamana oga wali in sargaalkan uu is dilay iyo in si caadi ah u geeriyooday.
Saraakiil iyo ciidamo katirsan AMISOM ayaa marar badan meydadkooda laga helay xeryo iyo goobo kale ay Muqdisho kaga sugnaayeen, qaar kamid ah saraakiishaasi ayaana la sheegay in iyaga gacantooda isku dileen.